Okul konuları / Lohahevitry ny sekoly – Diyaloglar | OpenTran
Okul konuları / Lohahevitry ny sekoly – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Okul konuları / Lohahevitry ny sekoly – Diyaloglar
Adama: Julia, inona ny taranja sekoly tianao indrindra?
Julia: Misy roa amin'izy ireo: Tantara sy Anglisy. Ahoana ny momba anao?
Adam: Ho gaga ianao, fa ny Matematika no tiako indrindra.
Julia :: Oh, tsy tiako ny matematika. Tsy misy dikany amiko ireo raikipohy sy famaritana rehetra ireo. Afangaroiko foana izy ireo.
Adam: Eny, afaka miteny toy izany koa aho momba ny anglisy. Tsy haiko mihitsy ny manavaka ny Past Simple Tense amin'ny Present Perfect ary tsy azoko hoe ahoana no fahafahan'ny olona.
Julia: Mila fanazaran-tena bebe kokoa ianao, mieritreritra aho.
Adam: efa nanandrana aho. Ny ray aman-dreniko aza dia nanakarama mpampianatra mba hanampy ahy, nefa tsy nandeha izy.
Julia: Ahoana ny tantara? Tianao ve sa tsia?
Adam: Tsy dia liana loatra amin'ity lohahevitra ity aho ary matetika mifangaro ny daty, ny zava-misy ary ny vanim-potoana.
Julia: Inona no tianao holazaina amin'ny fampifangaroana ireo vanim-potoana?
Adama: Midika izany fa ny taloha dia mitovy amin'ny medieval.
Julia: hitako. Hadinoko koa ireo daty indraindray ary hitako fa sarotra ny mitadidy ny zava-misy ara-tantara rehetra, saingy tokony holazaiko fa mpitantara tena mahaliana ny mpampianatra ny Tantara. Afaka mihaino ny tantarany mandritra ny ora maro aho.
Adam: manaiky tanteraka aho. Mahaliana kokoa ny mihaino azy. Ankoatr'izay dia tsy manao ratsy amin'ny ankizy mihitsy izy.
Julia: Ie, marina izany.
Adama: Ahoana ny hevitrao momba ny biolojia?
Julia: Tena tiako ity lohahevitra ity. Raha hiditra amin'ny oniversite fitsaboana aho dia tena hanao ezaka bebe kokoa amin'ny fianarana biolojia.
Adam: Ary heveriko fa ny mpampianatra ny biolojia dia hentitra loatra. Tsy midera anay mihitsy izy amin'ny ezaka ataontsika ary manome enti-mody betsaka.
Julia: Marina izany. Toa hentitra be izy. Na izany aza, heveriko fa mandefitra izy. Ny tiany fotsiny dia ny hiasantsika mafy sy hampitombo ny fahalianantsika amin'ny lohaheviny.
Adama: Marina angamba ny anao.
Julia: Afaka miteny toy izany koa aho momba ny mpampianatra Jeografia antsika. Hentitra ihany koa izy, saingy tiako ny mianatra azy. Ny jeografia dia lohahevitra tena mahaliana. Mahatonga ahy hivezivezy sy hijery an'izao tontolo izao.
Adama: tiako koa io lohahevitra io. Na izany aza, raha mila misafidy ny lohahevitra tiako faharoa aho dia misafidy PE.
Julia: Izany dia satria ianao no iray amin'ireo mpilalao basikety tsara indrindra amin'ny kilasinay.
Adama: Tsy izany ihany. Heveriko fa ny lesona PE dia tsara ho an'ny fahasalamana. Raha nanao fanatanjahan-tena bebe kokoa isika, dia ho salama foana.
Julia: Manaiky aho, saingy indroa isan-kerinandro ihany no ananantsika ireo lesona ireo.
Adam: Lohahevitra hitako fa mahasoa koa ny IT. Ny fahalalana informatika sy ny fomba fiasan'izy ireo dia ilaina ankehitriny.
Julia: Marina ny anao. Mivoatra haingana ny siansa informatika.